Hydroxypropyl methylcellulose waxyeello uma leh jirka bini aadamka, hydroxypropyl methyl cellulose waa mid nabdoon oo aan sun lahayn, waxaa loo isticmaali karaa cunto cuno, ma leh kuleyl, mana leh cuncun cuncunka maqaarka iyo xuubka xuubka. Guud ahaan waxaa loo tixgeliyaa inay tahay qaadasho maalinle ah oo ammaan ah oo dhan 25mg / kg, prot ...
Budada dib-u-kala-goosha budada latex-biyo-baxa ah waa kala-firidh budo ah oo laga sameeyay polymer emulsion polymer wax laga beddelay iyadoo lagu buufiyo qalajinta. Waxay leedahay kala firidhid wanaagsan waxayna dib ugu noqon kartaa emulsion xasilan oo deggan kadib markay biyo ku darto. Waxqabadka wuxuu la mid yahay emulsion-ka bilowga ah. Aad ...
Budada dib loo soo celin karo waa budo ay sameysantay buufin qalajiyaha polymer emulsion, sidoo kale loo yaqaan caag budada qalalan. Budada Tani si dhakhso ah ayaa loogu yarayn karaa emulsion ka dib markay la xiriirto biyo, waxayna haysaa astaamo la mid ah emulsion-ka asalka ah, taasi waa, filim ayaa la sameyn doonaa ka dib marka uumi baxa biyuhu ...